4 Ao amin'ny. Centerset Faucet fandroana 2-tanana
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Faucet fandroana Chrome miaraka amin'ny fivoriamben'ny tatatra
naoty 4.74 avy tany 5 mifototra amin'ny 23 mpanjifa naoty
Ny fomba amam-bika, fampisehoana ary ny fanomezana, ny fanangonana ny wowowfaucet no tsara indrindra amin'ny efitrano fandroana rehetra. Ny fatran'ny haavon-drivotra 1.2 g isan-tsegondra dia ahafahana miaro rano. Ny baoritra misy valifaty misy seramika dia manome fiainana tsy misy fotaka ary miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana metaly dia manao haingana kokoa noho ny taloha. Safidy mahafinaritra ho an'ny trano fidiovana isan'andro
2321400C torolàlana fametrahana
Faucet fandroana afovoany 4 santimetatra 2321400C haavo: 7.5 ″; Haavon'ny spout: 4.4 ″; Hole habe: 25 - 38 mm1 - 1.5 ″
Fitaovana efitra fandroana an'ny vanity Chrome: faran'ny chrome manankarena, endrika fitaratra toy ny fitaratra, tonga lafatra amin'ny haingon-trano fanaon'ny efitra fandroana ankehitriny, mifanentana amin'ny trano fandraisam-bahiny, condominium, trano fandraisam-bahiny, efitra fandroana, fampiasana ara-barotra, toeram-pivarotana
Fehcet Basin-droa Double: fametahana 2-tantanana, tsotra hanitsiana ny mari-pana sy ny tahiry, avo kokoa ny arc spout no manome anao fanadiovana betsaka eo ambanin'ny spout
Kalitao avo lenta: kapila ceramic NSF miantoka tsy misy leakage, akora maharitra (SS201, ary ny metaly zinc), ny ain a ABS manondrana rano malefaka sy malefaka
SKU: 2321400C Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: fivoriambe, kromo voatsangana, fanoherana toerana
23 mandinika ny Fandroana amin'ny efitra fandroana Chrome WOWOW miaraka amin'ny fivoriambe
A *** f2020-03-28
Volavola tsara, endrika marevaka ary maoderina. Ny fisondrotan'ny faucet avo dia miompana amin'ny fikorianan'ny fako misy efitrano handasana ny tananao na ny lohanao.
Enga anie ka nanao faucet nilentika tao an-dakozia tamin'ny endriny mitovy izy ireo.
A *** f2020-03-29
Faucet sy vidiny lehibe. Mora apetraka.
Tiako ny endrik'ity faucet ity. Nanisy fiovana lehibe teo amin'ny endrika fandroana. Vidiny tena mirary.
L l ***2020-04-05
tonga lafatra ho an'ny fandroako. Tsy misy kilalao leakLooks intsony. Miasa tsara ary mampihena ny rano mora sy malama.
Tena afa-po amin'ny vidiny, ny kalitao ary ny fombany, izy io dia niaraka tamin'ny karazana fantson-tànana sy fonon-tànana, hahazo iray hafa aho ho an'ny fandroana fandroana hafa raha maty.
Mora apetraka, toa kalitao tsara sy tena tsara tarehy! Toa manankarena sy mifanentana tokoa.
Tena tsara tarehy, nanana olana tamin'ny fametrahana ny tatatra izahay, saingy nahagaga ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary nanampy anay avy hatrany izy ireo!
*** G E2020-05-05
Tsy dia sarotra loatra ny nametraka azy: ny lalan-tsikelikely dia mazava ary mifanaraka tsara tsara ireo singa rehetra, tsara sy mora ampiasaina - tsy toy ireo faucet taloha tokony ho hitantsika noho ny fametahana sy ny harafesiny. Ilay trano novidianay dia nisy rano kely falemana tao amin'ny fandroana master; ireo dia tsy voalaza loatra ary mifanentana tsara amin'ny habakabaka.
C *** f2020-05-07
Ny faucet ny azy dia tsara. Azoko atao ny manoro hevitra ny fividianana voanjo faucet isan-karazany izay omena dia mahatsiravina fa tsy mora tadiavina ary esorina mora foana.
Tianay ny fijerin'ity endrika ity ary ny kalitaon'ny namboarina dia mendrika ny vidiny, saingy tsy mandeha tsara ny tatatra ataonay ka tsy afaka manidy azy io izahay ary feno rano ilay vovo.
Mahafinaritra ery. Toa tsara. Tapatapahana tsara!
*** L Y2020-06-01
Mora ny mametraka fauxet ary toa tsara! Adidy mavesatra be izany amin'ny vidiny. Ny mpijanona mipoitra dia tantara hafa. Kely izy io, plastika ary tena sarotra ny manitsy azy. Tsy maintsy nividy kalitao tsara kokoa ary nanolo ny tatatra tafiditra.
Nila fantsom-panafody ho an'ny fandroana ho an'ny zanako lahy aho ary ity no izy !! Tena tsara izany. Mivezivezy koa io, izay tsy fantatro. Vao nametraka azy izahay fa toa kalitao tsara!
Fametrahana mora ary mitovy tsara amin'ny Delta izay nosoloiny. Toa premium indrindra, na dia tsy matevina kokoa aza ny fisehoany noho ny nikela borosy
Toa tsara ary nahatonga ny RV kelinay nilentika betsaka kokoa hampiasaina.
Ny isa azo itokisana sy ny endrika maoderina an'ity faucet ity. Mety tsara amin'ny trano fandroana an-trano.
G D ***2020-07-03
Tianay ireo faucet ireo
Ampiasaina handro amin'ny efitrano fatoriana lehibe. Mora apetraka, manana torolàlana mazava. Mijery tsara miaraka amin'ny fandaminana ny fandroana.
F *** f2020-07-16
Tena tsara napetraka tao amin'ny trano fidiovana reniko.
Tiako ny bika, toa mihoatra ny vidiny izy io. Mihodina malama ny tahony. Mety tsara ny fantson'ny pop up.
ity dia faucet tsara tarehy iray izay nidera ny fandroako tsara tarehy namboarina tsara ary mendrika izany amin'ny vidiny izao nividianako ilay faharoa faly amin'ity vokatra ity
Tsy ity ihany no iray amin'ireo faucet tsara tarehy indrindra nananako, hoy ny vadiko fa mora ny mametraka azy ary ny specs dia atao doka. Ny mpivarotra ny fantsona dia nanana ny vokatra taminay tamin'ny fotoana firaketana ary tena nanaiky tokoa. Tsy tompon-trano fotsiny aho, fa i Realtor koa. Hanoro hevitra an'ity vokatra ity sy ny mpivarotra amin'ny namako sy ny mpanjifako aho.
Misaotra ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny vokatra mahafinaritra!
Tsy nanantena faucet an'ity kalitao ity aho tamin'ity vidiny ity. Mbola tsy naheno an'ity marika ity aho taloha, ary tena talanjona tamin'ny kalitao rehefa tonga io. Ny faritra varahina rehetra ao anatiny, mavesatra be, tsy misy plastika, mora apetraka, eny fa na ny fantsakana aza dia noforonina tsara. Bokotra fanosehana ny miasa. Ny ampahany sarotra indrindra dia ny famoahana ny tatatra taloha. Ny vadiko dia tsy bandy lehilahy mora raisina ary namoaka ilay taloha izy, ilay vaovao ary napetraka tao anatin'ny adiny iray ny zava-drehetra. Ary ny ampahany tsara indrindra – tsy misy fantsona mitete intsony !! Tsy andriko izay hahitako ny faktiorako rano manaraka!